May 2017 - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
၁။ မင်္ဂလာပါဆရာ သူငယ်ချင်းက အသက် ၃၅ နှစ်။ ပထမဆုံး ကိုယ်ဝန်ပါ။ ဖေဖေါ်ဝါရီမှာ မင်္ဂလာဆောင်ပြီး ဧပြီလမှာ ကိုယ်ဝန်ရတာပါ။ တားဆေး မသုံးပါ။ OG နဲ့ပြတော့ ကိုယ်ဝန်နဲ့အတူ သားအိမ်မှာ အလုံးနှစ်လုံး ရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်နဲ့မို့လို့ ခွဲထုတ်ဖို့ အဆင်မပြေဘူး လို့သိရပါတယ်။ သန္ဓေသားအတွက် အန္တရာယ်ရှိသလား သိချင်လို့ပါဆရာ။ သူငယ်ချင်းကိုယ်စား မေးပေးတာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၂။ ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက် ၃၁ပါ။ အိမ်ထောင်သက် ၂နှစ်၊ ကလေးမရှိပါ။ ကျွန်မမြန်မာပြည်ကို ၉ ရက်တာ ခဏပြန်တုန်း သုံးလခံဆေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ အစောပိုင်းမှာလည်း ရာသီမလာခဲ့ပါဘူး အဲ့ဒီနောက် ရာသီမလာတာ အခုထိပါပဲ။ ဗိုက်ကလည်း နဂိုထက် ပူနေပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရတယ်ထင်ပြီးနေလာခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည် ပြန်ရောက်တော့ ultrasound ပဲ ရိုက်ကြည့် ဖြစ်ပါတယ်။ အသားလုံးလို့ ပြောပါတယ်ရှင့်။ အဲ့ဒါ စိတ်ပူရပါသလား။ OG ပြရန် အခက်အခဲများ ရှိနေလို့ မေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ဆရာကြီးရှင့်။ အခုဆိုရာသီမလာတာ ၇ လထဲ ဖြစ်နေပါပြီ။ ရာသီသွေးပေါ်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သိချင်ပါတယ်။ အသားလုံးဆိုတာ အန္တရာယ်ရှိလားလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင့်။ ultrasound ပုံပါ ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်။
အာလ်ထွာဆောင်းကို ပုံမဟုတ် အဖြေမှတ်ချက်သာပို့ပါရန်လို့ မေးနည်းစည်းကမ်းမှာထည့်ထားတယ်။ ရောဂါအမည် ဆေးစာနဲ့ မသိရ။ သားအိမ်အလုံး-အကျိတ်ဆိုရင် Fibroid, Myoma ဖြစ်မယ်။ ဘလော့မှာ ရှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ရှိလို့ စစ်ဆေးတော့မှ သားအိမ်မှာ အလုံး-အကျိတ်ရှိနေတာသိကြရသူ မနည်းပါ။ မေးတာလည်း ခဏခဏလာတယ်။ သားအိမ်မှာ အလုံး-အကျိတ်ရှိနေနေပေမယ့် ခံစားရတာမသိသာလို့ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ကို ဘယ်လိုသက်ရောက်သလဲ။ မတူကြပါ။ အခက်အခဲဖြစ်စေတာ အတော်နည်းပါတယ်။ နာတာ၊ ပျို့အန်တာ၊ ဖျားတာ ဖြစ်တတ်တယ်။
၁။ ဆရာမင်္ဂလာပါရှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည် ကင်းမလက်မဲကိုက်ခံရတာကိုယ်ဝန်ဘာဖြစ်နိုင်သလဲရှင့်။ ကိုယ်ဝန်ကို စိုးရိမ်လို့ပါရှင့်။ ကိုယ်ဝန်က ၄ လပါရှင့်။
၂။ ဆရာ သမီးအသက်က ၃ဝ ပါဆရာ။ ကိုယ်ဝန်က ၅ လပါဆရာ။ ခြေဖနောင့်နားကို ကင်းမြီးကောက် အထိုးခံရလို့ပါဆရာ။ နှုတ်ခမ်းနဲ့ လက်တွေ ထုံကျင်ကျင်ဖြစ်နေပါတယ်ဆရာ။ ဆေးခန်းသွားတော့ ATT ၂ လုံး ထိုးပေးလိုက်ပါတယ်ဆရာ။ စိုးရိမ်ရပါသလဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
၃။ ကျနော့်ခြေထောက်ကို အကောင်တကောင် ကိုက်သွားတယ်။ ဘာကောင်မှန်း မသိဘူး။ အဆိပ်ဖြေဆေး ဘာသောက်သင့်လဲ ပြောပြပေးပါ။
၄။ ကင်းခြေများကိုက်ခံရတာ ခြေထောက်ယောင်နေတယ်။ ဘာသောက်သင့်လဲ။ ဆရာ့ဆိုဒ်မှာ အဆိပ်ရှိတဲ့အကောင် ကိုက်ခံရရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။ အချိန်ရရင် ရေးပေးစေချင်ပါတယ်။
၅။ ဒေါက်တာရှင့် ကျွန်မအသက် ၃၂ နှစ်ပါရှင့်၊ ကိုယ်ဝန်က ၂၅ ပတ်ထဲရောက်နေပါပြီ၊ နေပြည်တော်ကပါ ဝန်ထမ်းပါရှင့်၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမရသေးလို့အပျိုဆောင်မှာနေရပါတယ်၊ မနေ့ည ၆နာရီခွဲလောက်တုန်းက ထမင်းစားပြီး အဆောင်ပြင်ထွက် လမ်းလျှောက်မိလိုက်ပါတယ်ဆရာ အဲတာလမ်းတဝက်ရောက်တော့ ခြေတောက်နားကစူးကနဲနာပြီး အရမ်းကို ပူစပ်ပူလောင်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် အကောင်တကောင်ကောင်ကိုက်လိုက်တယ်ဆိုတာသိပြီး ခါလိုက်မိပါတယ်။ အကောင်က လွှင့်သွားပြီးထွက်ပြေးသွားတာ ဘာအကောင်လဲလိုက်ကြည့်တာမမြင်လိုက်ရပါဘူး။ နဲနဲလဲမှောင်နေလို့ပါ အဲဒါနဲ့ အဆောင်ကိုပြန်ပြေးပြီး အနာကို ရေဆေးပြီးကြည့်လိုက်တော့ အပေါက်ရာနှစ်ပေါက် တွေ့ရပါတယ်။ ခါတိုင်းနေ့တွေတော့ ကင်းခြေမျှားတွေ လက်ဝါးလောက်အရှည်ရှိတာတွေတွေ့မိပါတယ်။ အနီရောင်ပါ။ အဲအကောင် ကိုက်လိုက်မိတာလို့ ထင်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဆေးရုံကိုပြေးလာပြီးပြတော့ ၂၄ နာရီစောင့်ကြည့်ရမယ်ပြောပါတယ်။ ဘာဆေးမှတော့ မထိုးပေးပါဘူး။ သွေးတွေတော့ ၂ နာရီခြားတကြိမ် လာလာဖောက်ပြီးစစ်နေပါတယ်။ ဆီးလဲစစ်ရပါတယ်။ ခြေတောက်အနာနေရာက တစစ်စစ်ကိုက်ပြီး ယောင်ကိုင်းနေပါတယ်။ ညဆယ်နာရီလောက်ကတော့ဆေး ၃ မျိုး လာတိုက်ပါတယ်ရှင့်။ ခုမနက်ထိအိပ်မရပါဘူး။ အနာကကိုက်နေလို့ ခြေတောက်ကခြေဖမိုးကပျံ့ပြီး ယောင်ကိုင်းနေပါတယ်။ ထိမရဘူး။ ကျွန်မသိချင်တာက အဲအဆိပ်က ကိုယ်ဝန်အပေါ်ထိခိုက်နိုင်ပါသလားရှင့်။ ကလေးတခုခုဖြစ်နိုင်ပါသလား သိချင်လို့ပါဆရာ။ စိုးရိမ်လို့ပါ။
၆။ ဆရာ သမီး အခုညနေ ၆ နာရီက ကင်းခြေများကိုက်ခံရလို့ og က အဆိပ်ပြေဆေး၁လုံးထိုးပေးပါတယ်။ ဗိုက်ထဲက ကလေး ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆရာ။ မွေးရင်ရောဘာဖြစ်နိုင်ပါသလဲဆရာ။ ကျေးဇူးပြု၍ဖြေပေးပါဆရာ။
အရေးအကြီးဆုံး ကင်းသုံးကင်းရှိတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ Centipede ကင်းခြေများ၊ Scorpion ကင်းမြီးကောက်နဲ့ Black-earth Scorpion ကင်းမလက်မည်း (ကင်းပုစွန်) တွေကို ပြောကြတာ များတယ်။ တခြားကင်းတွေလဲ ရှိသေးတယ်။ Millipede ကင်းနားသန်၊ Scolopendra ကင်းစုန်း၊ Grass-lizard ကင်းလိပ်ချော။ နောက်ပြီး Cuttle fish ကင်းမွန်ကတော့ စားရတဲ့ငါးအုပ်စုထဲက ဖြစ်တယ်။ လူတယောက်ဟာ ကင်းသုံးကင်းမှာ တကင်းပြီးတယ်ပြောကြတယ်။ ဒီလို အကောင်တွေ ကိုက်ရင် သေတယ် ဆိုတာတော့ ရှားတယ်။ ဘယ်အကောင်ကိုက်ကိုက် ဖြစ်တာတွေကလဲ ဆင်တူသေးတယ်။ နည်းနည်း ခံရတာနဲ့ များများခံရတာတော့ ရှိမှာပေါ့။ အလာဂျီဖြစ်မှသာ ဆိုးတယ်။ အင်ပြင်ထတာကနေ ပျို့တာ-အန်တာအပြင် ရှော့ခ်ရတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။
စိတ်အေးအေးထားပါ။ အကိုက်ခံရတဲ့နေရာကို ဆပ်ပြာနဲ့ရေနဲ့ ကောင်းကောင်းဆေးကြောလိုက်ပါ။ အရက်ပြန်-အရက် မသုံးပါနဲ့။ ရေခဲတင်ပေးပါ။ ၁ဝ မိနစ်တခါ တင်လိုက်၊ နားလိုက်လုပ်ပါ။ ၄၈ နာရီအထိ အဆိပ်ဒဏ်ခံရနိုင်တယ်။ ဒါထက်ကြာကြာ သိပ်ဆိုးဝါးသူတွေလဲ ရှိတတ်တယ်။ နာတာသက်သာအောင် Acetaminophen နဲ့ Ibuprofen တခုခုကို အစာနဲ့တွဲ သောက်ပါ။ ရောင်တာ၊ ယားတာသက်သာအောင် Hydrocortisone cream လိမ်းဆေး တခုခုလိမ်းပါ။ မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး ATT မထိုးရသေးရင် ထိုးပါ။ အနာဖြစ်သွားရင် ဆေးထည့်ပါ။ လိုအပ်ရင် ပိုးသေဆေးသောက်ပါ။ အဆိပ်ကနေ သေစေတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။ ဆိုးဝါးရင် အလာဂျစ်ဖြစ်ရင် အသက်ရှူရခက်လာမယ်၊ နှလုံးခုန်တာ မြန်လာမယ်၊ လည်ပင်းအစ်လာမယ်၊ အရေးပေါ်ဌာနသွားရသူတွေကို ဆေးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်မယ်။ အသက်ရှူကူဘို့လိုရင် လုပ်ပေးမယ်။ သွေးပြန်ကြောထဲ ဆေးသွင်းဘို့ လိုရင် လုပ်မယ်။ ဆေးလိုသူတွေကို ပေးမယ်။
သာမန်ကာရှန်ကာ ဖြစ်တာကို ရှေးဦးသူနာပြုလုပ်တာ၊ အနာအကိုက် သက်သာဆေး၊ အင်တီဟစ်စ်တမင်းဆေးပေးတာနဲ့ ရတယ်။ ကလေးငယ်တွေနဲ့ အသက်ကြီးသူတွေ အကိုက်ခံရရင်တော့ မပေါ့ရဘူး။ အဆိပ်သိပ်ပြင်းတဲ့ အရပ်ဒေသက အကောင်တွေအတွက် ဖြေဆေးဖေါ်ထားတယ်။ ဥပမာ အရီဇိုနာကင်းတွေအတွက် Antivenin ပေါ်နေပြီ။ ဆိတ်သွေးကနေ ဖေါ်ထားတာ။ တိရစ္ဆာန်ကနေမထုတ်တဲ့ Anascorp ဆေးကိုလဲ စမ်းသပ်နေတယ်။
အာရုံကြောလက္ခဏာတွေ = ထုံတာကျင်တာ ခြေတွေလက်တွေမှာ ဖြစ်မယ်၊ ဂနာမငြိမ်ဖြစ်မယ်၊ စိတ်ရှုတ်ထွေးမယ်၊ ဂရောင်ခြောက်ခြားဖြစ်မယ်၊ အမူအယာ မတူတာ ဖြစ်မယ်။ ကိုယ်ပူ၊ နှလုံးခုန်မြန်၊ သွေးဖိအားတက်၊ နှလုံးခုန် မမှန်၊ အဆုပ်ပွတာ၊ သွေးထဲမှာ အချိုဓါတ်များတာ။ လေပြွန်ကျဉ်း၊ နှလုံးခုန်နှေး၊ သွေးဖိအားကျ၊ သွားရည်များ၊ မျက်ရည်များ၊ ဆီးများ၊ အစာခြေရည်များ၊ ဝမ်းလျှော၊ နှာရည်များ၊ လေပြွန်ထဲ အရည်များ၊ ဆီး-ဝမ်း အထိန်းရခက်၊ လိင်အင်္ဂါ ပြန်မကျအောင် သန်မာ၊ အမြိုရခက်၊ သူငယ်အိမ်ကျဉ်း။
ဆိုမက်တစ်လက္ခဏာတွေ = ကြွက်သားတွေတင်း၊ စိတ်အလိုမပါဘဲ ကြွက်သားတွေလှုတ်၊
ခရေနီရယ် ဦးနှောက်အာရုံကြော လက္ခဏာတွေ = အပေါ်မျက်ခွံ အောက်ကျ၊ မျက်လုံး လည်-လှုပ်-ကြည့်မကောင်း၊ သူငယ်အိမ်ကျယ်၊ လျှာလှုတ်၊ အမြိုရခက်၊ သွားရည်များ၊
အလာဂျီလက္ခဏာတွေ = အင်ပြင်ထ၊ ဖူးရောင်၊ လေပြွန်တုန်ခါ၊ အနာဖလက်ဆစ်-ရှော့ခ်၊
(၃) ဦးနှောက်အာရုံကြောဖြစ်ဖြစ် ဆိုမက်တစ်အာရုံကြောဖြစ်ဖြစ် လက္ခဏာတွေရှိတာ ၄့၇%၊
(၄) ဦးနှောက်အာရုံကြောရော ဆိုမက်တစ်အာရုံကြော လက္ခဏာတွေပါ တွဲရှိတာ ၃%။
၁။ သံလွင်ဆီကို ကင်းမလက်မည်း၊ ကင်းမြီးကောက်၊ ကင်းခြေများစတဲ့ ကင်းအမျိုးမျိုးကိုက်ရင် ကင်းဆိပ်ဖြေဆေး အဖြစ် သုံးနိုင်တယ်။
၂။ ကြက်သွန်နီကို မီးဖုတ်၊ နွမ်းပျော့သွားတဲ့အခါ ငရုတ်ဆုံထဲ ကြိတ်ခြေပြီး၊ ထွက်လာတဲ့အရည်ကို လိမ်းပေးပါ။ အဖတ်ကိုလည်း အုံစည်းပေးထားနိုင်တယ်။
၃။ မန်းကျည်းစေ့ကိုသွေးပြီး လိမ်းပေးပါလို့ မှတ်သားရပါတယ်။
၁။ ပရိတ်ပရိကံ မြန်မာပြန် = သမ္မာဒေဝ နတ်ကောင်း-နတ်မြတ်တို့သည် မင်းဘေး၊ သူခိုးဓားပြဘေး၊ လူရိုင်း-လူပျက်ဘေး၊ ဘီလူးဘေး၊ မီးဘေး၊ ရေဘေး၊ မြေဘုတ်ဘီလူးဘေး၊ သစ်ငုတ်ခလုပ်ဘေး၊ ဆူးငြောင့်ဘေး၊ မကောင်းသော နက္ခတ်ဘေး၊ ဇနပုဒ်၌ ဖြစ်ပွားတတ်သော ကူးစက်ရောဂါဘေး၊ မတရားဘေး၊ အယူလွဲမှားဘေး၊ သူယုတ်မာဘေးနှင့် ကြမ်းတမ်းသော ဆင်၊ မြင်း၊ သားရဲ၊ နွား၊ခွေး၊ မြွေ၊ ကင်းမြီးကောက်၊ မြွေစိမ်း၊ သစ်၊ ဝံ၊ အောင်း၊ ဝက်၊ ကျွဲ၊ ဘီလူး၊ ရေစောင့်ဘီလူး တို့ကြောင့် ဖြစ်ပွားတတ်သော အထူးထူးသောဘေး၊ အထူးထူးသော ရောဂါ၊ အထူးထူးသော ဥပဒ္ဒဝေါများ မဖြစ်ပွားအောင် စောင့်ရှောက်တော်မူကြပါ။
၂။ ခန္ဓသုတ် (၇) = ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၊ ရတနာသုံးပါးတို့သည် မနှိုင်းယှဉ်အပ် မြင့်မြတ်တော် မူကြပါပေသည်။ မြွေ၊ ကင်းမြီးကောက် စသော တိရစ္ဆာန်တို့သည် နှိုင်းယှဉ်စရာ ကိလေသာ ပြည့်ဝ ယုတ်ညံ့ ကြကုန်၏။
• အလာဂျီရလို့ လည်ပင်း ရောင်တဲ့သူဆိုရင် အစာမစားစေနဲ့။
• အင်တီဟစ်တမင်းဆေးအုပ်စုထဲက Cimetidine နဲ့ Diphenhydramine ကို သုံးနိုင်တယ်။
ခံစားရတာတွေဟာ မိနစ်ပိုင်းကနေ ၃ ရက်အထိ ကြာနိုင်တယ်။ သေတဲ့အထိဖြစ်ရတာက အသက်ရှူလမ်းမှာ ဆိုးဝါးလာလို့ ဖြစ်တယ်။ အနာဖလက်ဆစ်ရှော့ခ်ကြောင့် လေပြွန်ကျဉ်းတာ၊ လေပြွန်ထဲ လည်ချောင်းထဲမှာ အရည်တွေထွက်တာ၊ အသက်ရှူရာသုံးတဲ့ ကြွက်သားကြီး လေဖြတ်တာတွေ ဖြစ်တယ်။ ချက်ချင်းထိထိရောက်ရောက် ဆေးကုရမယ်။
Pregnancy Signs ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်းလက္ခဏာများ
ဆရာရှင့် ကိုယ်ဝန်လက္ခဏာတွေက ဘာတွေပြတတ်သလဲရှင့်။ သမီး ၈ လပိုင်း လအစက ရာသီဆင်းပါတယ်ရှင့်။ သမီး ဘာဆေးမှ မသုံးပါဘူးရှင့်။ အခုရက်ပိုင်း အစားတွေအရမ်းစားပါတယ်။ ဆီးလည်းခဏခဏသွားပါတယ်။ မနေ့က ဆေးခန်း သွားပြပါတယ်။ ဆီးစစ်ကြည့်တော့ မျဉ်းတကြောင်းပဲ ပေါ်ပါတယ်ရှင့်။ ဆရာမကတော့ ကိုယ်ဝန်နုရင်လည်း မပေါ်သေးဘူး ပြောပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ကိုသံသယရှိရင် နောက် ၄-၅ ရက်မှာ ဆီးထပ်စစ်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်း လက္ခဏာတွေကို တချို့မှာ ဘာမှမခံစားရဘူး။ တချို့ကြ လူမမာကြီးလို အတော်ခံစားရတယ်။
၁။ ရာသီမလာတော့ပါ၊ ဒါပေမဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီးသား မျိုးဥက သားအိမ် အတွင်းဆုံးလွှာကို လာပြီးတွယ်ကပ်ချိန်မှာ သွေးနဲနဲ စွန်းမယ်။ ဆီးစပ်နေရာကလည်း နာတာခံစားရနိုင်တယ်။ ရာသီလာလို့နာတာနဲ့ ခွဲခြားရမယ်။ မျိုးဥထွက်ချိန်ဆိုတာ လလည်ရက်နဲ့ ၆-၁ဝ ရက်မှာဖြစ်တယ်။
၈။ ညှစ်ရင် နို့ရည်ကြည် နည်းနည်းထွက်နိုင်ခြင်း၊
၁၅။ ဗိုက်ထဲက ကလေးလှုပ်တာကို အများဆုံးက ၂ဝ ပါတ်ကျော်မှသာသိတယ်။၊ ၁၃-၂၅ ပါတ်အထိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။
၁၈။ အာလ်ထွာဆောင်းရိုက်လျှင်တွေ့ရခြင်း၊ ကိုယ်ဝန် ၄ ပါတ်ခွဲမှာ Gestational sac မြင်ရပြီ။ Yolk sac ကို ၅ ပါတ်၊ Embryo ကို ၅ ပါတ်ခွဲမှာမြင်ရပြီ။
၁၉။ ကလေးနှလုံးခုန်သံ နားထောင်၍ရခြင်း၊ Doppler ကရိယာနဲ့နားထောင်ရင် ၈-၁ဝ ပါတ်အထိ မကြားနိုင်သေးပါ။ ၁၂-၁၄ ပါတ်ရောက်မှသာ ကြားရတာများတယ်။ စကြားရချိန်မယ် တမိနစ်ကို ၁၈ဝ အထိမြန်တယ်။ နောက်ပိုင်း ပုံမှန် ၁၂ဝ-၁၆ဝ အထိရှိတယ်။ အာလ်ထွာဆောင်းနဲ့စမ်းရင် ၆ ပါတ်မှာ ၉ဝ-၁၁ဝ၊ ၉ ပါတ်မှာ ၁၄ဝ-၁၇ဝ၊
သိပ်မသိသာတဲ့၊ လူတိုင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မဲ့ အချက်တွေကတော့ ခေါင်းကိုက်တာ၊ စိတ်မူပြောင်းတာ၊ စိတ်တိုတာ၊ ဒီအချက်တွေဟာ ရာသီမလာခင်ဖြစ်ချင်တာတွေနဲ့ အတူတူဖြစ်တယ်။ ဝမ်းချုပ်တာ Progesterone ဟော်မုန်းကြောင့် ဖြစ်တယ်။ ဒီဟော်မုန်းက အစာကိုအောက်ဆင်းတာ နှေးစေတယ်။ ဗဂျိုင်းနားနံရံတွေက ပိုထူလာတယ်။ ပိုပြီးစိုတာ၊ ဖြူတဲ့ နို့လိုဆင်းတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေတဲ့ကာလ တလျှောက်လုံးမှာလည်း အဲလိုရှိနေနိုင်တယ်။ ဆေးကုစရာ မလိုပါ။ ဒါပေမဲ့ အနံ့ဆိုးလာရင်၊ ယားယံလာရင်၊ ဆင်းတာက အရောင်ပြောင်းလာရင်တော့ ဆေးစစ်ပြီး ကူသမှုခံယူရမယ်။
ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်းလက္ခဏာတွေရှိချင်ရှိနေပေမဲ့ ဆီးစစ်မှသာ အသေအချာပြောနိုင်ပါတယ်။ ဆီးစစ်နည်းကို စောစောစမ်းရင် ကိုယ်ဝန်ရှိနေပေမဲ့ အနုတ်ပြနိုင်တယ်။ ရာသီလာရမဲ့ရက်ထက် တပတ်နေလို့ မလာသေးရင်စစ်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ရှိမယ် ထင်ပေမဲ့ အနုတ်ပြနေရင် နောက် ၄-၅ ရက်အကြာမှာ တခါထပ်စမ်းပါ။ မနက်ခင်းသွားဆီးကို စစ်ပါ။ ရေလည်း မသောက်သေးဘဲ ၄ နာရီလောက် ဆီးအောင့်ထားပြီး သွားတဲ့ဆီးလည်းရတယ်။ ကိုယ်ဝန် ၄-၅ ပတ်ရှိနေသူဆိုရင် ဘယ်အချိန်သွားတဲ့ဆီးဖြစ်ဖြစ်ရတယ်။ တချို့ဆေးညွှန်းတွေက ၇ ရက်စောင့်ခိုင်းတယ်။ ၇ ရက်အကြာ တခါထပ်စစ်လို့ အနုတ်ဖြစ်နေမယ်၊ ရာသီလည်းမလာသေးရင် ဆရာဝန်စမ်းဘို့လိုမယ်။ အာလ်ထွာင်းဆောင်း ရိုက်ချင်ရိုက်မယ်။
အားလပ်ရက်တွေမှာ အပြင်မထွက်ဘဲ အိမ်မှာနားနေရင်းနဲ့ အသားအရည် ထိန်းသိမ်းလိုသူတွေရှိမှာပါ။ ငွေနည်းနည်းနဲ့ နူးညံ့ဖြူစင်တဲ့ မျက်နှာလေးရဖို့ အိမ်မှာပဲ ကိုယ်တိုင် ပေါင်းတင်ကြည့်ရအောင်။
လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ ကြက်ဥတစ်လုံး၊ သခွားသီးတစ်ဝက်၊ ဒိန်ချဉ် ၁ ဇွန်းနဲ့ သံပုသီးအနည်းငယ်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါင်းတင်ဖို့ ဒါတွေကို ပေါင်းစပ်ရမှာပါ။
ကြက်ဥကိုတော့ အကာပဲယူပါမယ်။ သခွားသီးကို blender ထဲမှာ ကြိတ်လိုက်ပါ။ ကြက်ဥအကာ၊ ကြိတ်ထားတဲ့ သခွားသီးအနှစ်၊ ဒိန်ချဉ်တို့ကို ရောစပ်ပြီး သံပုရာရည် သုံးစက်ခန့် ထည့်ကာ ရောမွှေပေးပါ။
ကြက်ဥအကာက အသားအရေကို တင်းရင်းချောမွေ့စေပါတယ်။ အစိုဓာတ် ဖြည့်ပေးတဲ့ သခွားသီးနဲ့ ဒိန်ချဉ်ကတော့ အသားအရေကို ဖြူစင် ကြည်လင်စေပါတယ်။
အဆီပြန်ခြင်းတွေ ပျောက်ကင်းစေနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ သံပုရာကြောင့် သဘာဝ ပေါင်းတင်ဆေးက အစွမ်းထက်လှပါတယ်။
ပေါင်းတင်ဆေး ပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ မျက်နှာပေါ်မှာ သုတ်လိမ်းပေးပြီး နာရီဝက်ကြာမှ ရေဆေးပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပေါင်းမတင်မီ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ထားပါ။ ပေါင်းတင်ပြီးမှ ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ပါ။ ပိုမိုဝင်းပဖြူစင်တာကို သိသိသာသာ မြင်ရပါလိမ့်မယ်
ပါးစပ်နံတာဟာ လူအများနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေတဲ့သူတွေ အတွက်တော့ တကယ်ကို စိတ်ညစ်စရာပါ။ ကိုယ့်ပါးစပ်က နံနေတတ်ရင် လူတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု ကင်းမဲ့စေပြီး စိတ်ကျဉ်းကျပ်နေတာမျိုးတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပါးစပ်နံ့ နံတတ်တဲ့သူတွေမှာ သွားဘယ်လောက်တိုက်တိုက်၊ Mouthwash ဘယ်လောက်သုံးသုံး၊ အဲဒါတွေ အနံ့ပြယ်သွားတဲ့ အချိန်မှာ ပြန်ပြီး နံလာတတ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် ပါးစပ်နံခြင်းရဲ့ အဓိကတရားခံကတော့ ပါးစပ်ထဲမှာခိုအောင်းနေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေက အစားစားလိုက်တဲ့အခါမှာ ပါလာတဲ့ ပရိုတင်းဓါတ်တွေကို ဖြိုခွဲပစ်တာကြောင့်ပါ။
ပါးစပ်နံခြင်းပာာ လူ ၁၀၀ မှာ ၃ ယောက်လောက် ဖြစ်တတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပါးစပ်နံတာပာာ ပါးစပ်ထဲမှာ ခိုအောင်းနေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားများကြောင့် အများဆုံးဖြစ်နိုင်သော်လည်း အခြားဖြစ်နိုင်တာတွေ ကတော့ ရောဂါများ (ဆီးချိုရောဂါ၊ အသည်းရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အဆုတ်ရောဂါ)၊ ဆေးဝါးများ (အချို့ဆေးတွေပာာ ပါးစပ်ကို ခြောက်နေစေပါတယ်။ ပါးစပ်ခြောက်နေရင် ပါးစပ်က အနံ့ထွက်ပါတယ်။)၊ အစားအသောက်များ (ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ)၊ ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ ဆေးရွက်ကြီးဝါးတာ (အရေးအကြီးဆုံးပါပဲ။ ဆေးလိပ် သောက်တတ်သူတွေ၊ ဆေးရွက်ကြီး ၀ါးတတ်သူတွေမှာ ပါးစပ်အနံ့ ဆိုးတတ်ပါတယ်။)
ကိုယ့်ပါးစပ်ကထွက်တဲ့ အနံ့ကို ပြန်ရှူတာက မှန်ကန်တဲ့အခြေအနေကို မသိနိုင်ပါဘူး။ အများစု လုပ်တတ်တာက လက်၂ ဖက်ကြားထဲကို အသက်ရှူပြီး ပြန်ရှူကြည့်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီနည်းက မှန်ကန်တဲ့အနံ့ကို မရနိုင်ပါဘူး။ အရိုးရှင်းဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ အမှန်ပြောမယ်လို့ ယုံကြည်ရတဲ့သူကို အနံ့ခံခိုင်းကြည့်ဖို့ပါ။ နောက် တနည်းကတော့ သင့်ရဲ့ လက်ခုံပေါ်ကိုလျှာနဲ့ လျက်လိုက်ပါ။ ခြောက်သွားတဲ့အချိန်ကို စောင့်ပါ။ ပြီးရင် အနံ့ခံ ကြည့်ပါ။ အဲဒီအနံ့ပာာ သင့်ရဲ့ ပါးစပ်နံ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ခံတွင်းကို သန့်ရှင်းစွာထားပါ။
အစာစားပြီးတိုင်း သွားတိုက်တဲ့ အလေ့အထ လုပ်ပါ။ အဲလိုမှ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် အနည်းဆုံးတော့ တစ်နေ့ကို ၂ခါလောက်တော့ သွားတိုက်ပါ။ တစ်ခါတိုက်ရင် အနည်းဆုံး၂ မိနစ်လောက်ကြာအောင် တိုက်ပါ။ သွားတိုက်တဲ့နေရာမှာ သွားတင်မကဘဲ လျှာ၊ ပါးစောင်ကိုပါ တိုက်ပါ။ သွားကြိုးကို အသုံးပြုပြီး အစာစားပြီးချိန်မှာ သန့်ရှင်းပေးပါ။ သွားကြားတွေထဲမှာ ညပ်ကျန်နေတဲ့ အစာတွေပာာ ပါးစပ်နံတတ်တဲ့အတွက် ကြိုးအသုံးပြုပြီး ရှင်းပေးပါ။
သွားတိုက်တိုင်းမှာ လျှာခြစ်တံကိုပါ အသုံးပြုပါ။ သွားတိုက်တံကို ၂ လ ၃လမှာ တစ်ကြိမ် လဲပေးပါ။ သွားတိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အတင်းကြီး ဖိတိုက်တာပာာ အကျိုးမရှိစေပါ။ သွားဖုံးတွေကို ပျက်ဆီးပြီး ခံတွင်းနံ့နံတာ ပိုတောင် ဆိုးလာပါဦးမယ်။ နည်းလမ်းမှန်မှန်နဲ့ ညင်ညင်သာသာ တိုက်ပါ။
၂။ မချိုတဲ့ပီကေ ၀ါးပါ။
ပီကေ၀ါးခြင်းပာာ သွားရည်ဂလင်းတွေကို သွားရည်ထွက်အောင် လှုံဆော်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ပါးစပ်ကို စိုစွတ်နေစေပြီး သန့်ရှင်းနေစေပါတယ်။
၃။ ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီး သုံးစွဲမှုကို လုံးဝရှောင်ကြဉ်ပါ။
၄။ ပိုးသတ်ဆေးပါတဲ့ ပါးစပ်သန့်စင်ဆေးရည်ကို အသုံးပြုပြီး တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး၂ကြိမ်ခန့် ပါးလုပ်ကျင်းပါ။
၅။ သွားဆရာဝန်ဆီ တစ်နှစ်ကိုအနည်းဆုံး နှစ်ခေါက်လောက်တော့ သွားပါ။ သွားဆရာဝန်က သင့်ရဲ့ ခံတွင်းကိုသေချာစမ်းသပ်ပေးပြီး ခံတွင်းရောဂါတွေ ရှိနေရင်လည်း ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။
၆။ ရေများများသောက်ပါ။ ရေများများသောက်ခြင်းပာာ ပါးစပ်ကို စိုစွတ်နေစေတဲ့အတွက် ပါးစပ်နံတာကို သက်သာစေပါတယ်။
၇။ မိမိစားသောက်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို မှတ်ထားပါ။ မိမိစားသောက်တဲ့ အထဲက ပါးစပ်နံစေတယ်လို့ ထင်တဲ့ အစားအသောက်ကို မှတ်ထားပြီး ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ကြည့်ပါ။ ဒီအတိုင်းပဲ ဆေးဝါးတွေ သောက်သုံးနေတာ ရှိရင်လည်း အဲဒီဆေးဝါးစာရင်းကို ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ကြည့်ပါ။
ခံတွင်းနံ့နံနေတာပာာ အထက်ပါနည်းလမ်းတွေကို လုပ်ကြည့်လို့မှ မသက်သာလာဘူး ဆိုရင်တော့ မူရင်း အကြောင်းခံရောဂါ တစ်မျိုးမျိုးရှိနေနိုင်တဲ့အတွက် ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့ သေချာတိုင်ပင် စစ်ဆေးသင့်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Credit : ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ
၁။ ဆရာခင်ဗျာ Dextromethorphan ဆေးလေးအကြောင်းစုံသိချင်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက ကြိုက်နှစ်သက်လို့ နှစ်ချီစွဲခဲ့ပြီး အတော်တော်ဖျက် (ဖြတ်လို့ရေးရတယ်) ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ google မှာရှာပြီး အကြောင်းအရာတွေကို သိထားပေမယ့် မစုံလင်သေးဘူးထင်လို့ပါ။ လူငယ်တွေကိုလည်း သိစေချင်လို့ ရေးပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ခင်ဗျာ။
၂။ ဆရာရှင့် သမီးက ယခင်ကတည်းက ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲနဲ့ ရာသီဥတုအေးလာပြီဆိုရင် နှာစေးတတ်ပါတယ်။ အခုကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာလဲဖြစ်နေပါတယ်။ နေမကောင်းပါဖြစ်ချင်နေပါတယ်။ ဘယ်လို ဆေးဝါးမျိုး သုံးသင့်ပါသလဲရှင့်။
- Common cold အကြောင်း မနေ့ကတင် တင်ထားပါတယ်။
- ကျေးဇူးပါဆရာ။ ဆရာ့ post common cold ကိုဖတ်ပြီးပါပြီရှင့် အခုဆေးဆိုင်ကညွန်းတဲ့ဆေး Bronchest ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာရော သောက်လို့ရပါလားရှင်။ အခုချောင်းဆိုးရင်ကျပ်ပြီး နှာစေးနေလို့ပါရှင့်
- Bronchest ထဲမှာ ဘာတွေပါလဲ ရှာမရပါ။ ဆရာဝန် OG ကညွှန်တာသာသင့်ပါမယ်။
- Dextromethorphan HBr 15mg, Glyceryl Guaiacolate 100mg, Terphin Hydrate 200mg, Brompheniramine Malware 2mg တို့ပါတယ်လို့ ရေးထားပါတယ်ဆရာ။
- Dextromethorphan has been assigned to pregnancy category C by the FDA. Animal studies have revealed evidence of teratogenicity. Dextromethorphan is only recommended for use during pregnancy when benefit outweighs risk.
- ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှာ အဲဒီဆေး မသုံးသင့်ပါ။ ကလေးမွေးရာပါချို့ယွင်းချက်ရမလား စိုးရိမ်ရတယ်။
ချောင်းဆိုးတာက အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ချောင်းခြောက်ဆိုးတာ၊ ချွဲထွက်ပြီးဆိုးတာနဲ့ ရင်ကျပ်ပြီးဆိုတာ။ ရောဂါအလိုက် ရွေးရမယ်။ Expectorant ချွဲရှိနေသူတွေကိုပေးတာက ချွဲကိုတမင် မထွက် ထွက်အောင် လုပ်ပေးတာမျိုး ဖြစ်တယ်။ ချွဲဆိုတာ အထဲမှာရှိနေရင် ထွက်လာမှ ကောင်းတယ်။ Dry cough လည်ချောင်းယားလို့ ဆိုးတဲ့သူကို အဲလို ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး မပေးရပါ။ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးတွေမှာ သတိပေးချက်တွေရှိပါတယ်။ ကလေးတွေအတွက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေသာမက ထိရောက်မှုအတွက်ပါ မေးစရာတွေ ရှိတယ်။ Antitussive medicines အမျိုးအစားထဲမှာ အင်တီဟစ်တမင်း၊ dextromethorphan နဲ့ codeine or hydrocodone ကိုဒင်းတွေပါတယ်။ ကိုဒင်းဆိုတာ မူးယစ်ဆေးတမျိုးဖြစ်တယ်။ သူများနိုင်ငံမှာ ဆရာဝန် လက်မှတ်နဲ့သာ ရောင်းရတယ်။ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး အများစုထဲမှာ အရက်ပါသေးတယ်။ ပန်းနာဆိုရင် အကျပ်သက်သာဆေးပါတာမျိုးမှ သင့်တယ်။ Ephedrine/Aminophylline/Salbutamol ဆိုတာမျိုး ပါမယ်။ မူးယစ်စေတာမျိုးကို အလုပ်ချိန်၊ ကျောင်းချိန်ကိုကြည့် သောက်ရမယ်။ ချောင်းဆိုးစေတဲ့အကြောင်းတွေက မတူပါ။ ရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်တာက များတယ်။ အလာဂျီအတွက် သောက်ဆေးကို ပိုအားကိုးရတယ်။ ပိုးဝင်တာမှာလဲ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ပိုများတယ် ပိုးသေဆေး မလိုပါ။ ဥပမာ အအေးမိတာ၊ ဥတုကြောင့်ဖြစ်တာ။ဗက်တီးရီးယားကြောင့် လေပြွန်ရောင်၊ အဆုပ်ရောင်နဲ့ နူမိုးနီးယားဖြစ်ရင်တော့ ပိုးသေဆေးကို ချောင်းဆိုး ပျောက်ဆေးထက် ပိုအားကိုးရပါမယ်။
လည်ချောင်းနဲ့ လေပြွန်မကြီး ရောင်တာကို Croup ခရော့ပ်လို့လဲ ခေါ်တယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကနေဖြစ်တယ်။ အသံသြမယ်၊ အသက်ရှူသံ ဆူညံနေမယ်၊ စူရှပြီး ဟောင်သလို ချောင်းဆိုးမယ်။ ၅ နှစ်အောက် ကလေးငယ်တွေမှာ ဖြစ်တာများတယ်။ အအေးမိရာကနေ ဆက်ဖြစ်တတ်တယ်။ သူ့ဖါသူလဲ ပျောက်တယ်။ စတီရွိုက်ဆေးပေးနိုင်တယ်။ ရောင်နေတာတွေ လျှော့စေမယ်။ Nebulized epinephrine (Adrenaline) ဆေးကိုလဲ သုံးနိုင်တယ်။
နှာခေါင်းပိတ်နေတာကို Decongestants ဆေးက သက်သာစေတယ်။ စားဆေး၊ ထည့်ဆေးရှိတယ်။ (စတီရွိုက်) အစက်ချ နဲ့ ပန်းဆေး၊ Mucolytics အချွဲပျော်ဆေး၊ အင်တီဟစ်စတမင်းဆေး နဲ့ Penicillin, Amoxycillin ပဋိဇီဝဆေးတွေနဲ့ ကုသတယ်။ နှာခေါင်းထဲ ဆားရည်ဖြန်းတာလဲ သက်သာစေတယ်။ ခွဲစိတ်တာလဲ လုပ်ရတတ်တယ်။
အသက်ရှူလမ်း အထက်ပိုင်း ပိုးဝင်ခြင်းကို လည်ချောင်းရောင်ခြင်းလို့လဲ သတ်မှတ်တယ်။ နှာစေး၊ နှာချေ၊ ချောင်းဆိုး၊ အသံနာ၊ အာခေါင်နာ၊ မျိုချရင်နာ၊ ခေါင်းကိုက်၊ ကိုယ်ပူ စတာတွေ ခံစားရမယ်။ ဖြစ်ရင် တပါတ်-ဆယ်ရက်ကြာမယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် မျက်စိနာကလဲ ဆက်စပ်နေနိုင်သေးတယ်။ ရာသီဥတုကြောင့် အလာဂျီ ရတာ၊ တုပ်ကွေးတွေလဲ ဒီအုပ်စုထဲကဘဲ။ ကုသတဲ့အခါ ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုရင် အထောက်အကူပေးတဲ့ ဆေးတွေသာ ရှိတယ်။ ပိုးသေဆေးတွေ မလိုဘဲ မသုံးတာ ကောင်းတယ်။ ပဋိဇီဝဆေးကို စောင့်ကြည့်ပြီးမှ ပေးတာဟာ ရောဂါအတွက်နဲ့ လူနာ စိတ်သက်သာ ကျေနပ်မှု နှစ်မျိုးလုံးကို ကြည့်ချိန်ဆရတယ်။
ချောင်းဆိုးနေသူတွေအတွက် ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး မဟုတ်တာသုံးရင် ပိုကောင်းတာတွေရှိတယ်။ cool air humidifier ရေငွေ့ဓါတ်ပေးတာ၊ ရေ-အရည် ပိုသောက်တာနဲ့ နှာခေါင်းထဲ ဆားရည်စက် ချပေးတာ၊ အနားယူတာတွေလုပ်သင့်တယ်။ cough drops ကလေး ၄-၅ နှစ်ဆိုရင် အစက်ချဆေးပေးသင့်တယ်။
သတိထားဘို့က ဒီချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးထဲမှာ Codeine ပါတာဆိုရင် အိပ်ချင်မယ်။ ကြာကြာသောက်ရင် စွဲတတ်တယ်။ ကိုဒင်းမပါတာလဲရှိတယ်။ Vick လို အပူပါတဲ့ ချိုချဉ်လိုငုံဆေးကိုလဲ ငုံထားတာသက်သာစေမယ်။ Cetrizine ဆေး ၁ ပြား ညမှာ သောက်သင့်တယ်။ မြန်မာဆေးထဲမှာ ကွမ်းရွက်ကလဲ ထိရောက်တယ်။ ကွမ်းရွက်ကို လျှက်ဆားလုပ်ရောင်းတာလဲ ရှိတယ်။ ပျားရည်နဲ့ သံပရာရောတာလဲ သုံးကြတယ်။
ချောင်းဆိုးတယ်ဆိုတာ ရောဂါမဟုတ်ပါ။ ရောဂါတခုခုရှိနေလို့ ဖြစ်လာတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာသာဖြစ်တယ်။ အခံရောဂါကို ကုဘို့ပိုအရေးကြီးတယ်။ Cough Syrup Abuse ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး တလွဲသုံးတဲ့အကြောင်း စာတပုဒ် ရေးထားပါတယ်။
၁။ ဆရာ မင်္ဂလာပါရှင့် သမီးက့့ မြို့ကပါ။ အမေ့အသက်က ၅၃ နှစ်ပါဆရာ။ အမေ့မေးစေ့အောက်မှာ အကျိတ်တွေ့လို့ပါ။ သိတာတော့ သိပ်မကြာသေးပါဘူးဆရာ။ အရွယ်အစားက လောက်စာလုံးလောက်ရှိပါတယ်။ အကျိတ်နေရာက တင်းကျပ်ကြီး ဖြစ်နေပြီးတော့ ညနေကျရင် ပူတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင့်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ ပြောပြပေးပါအုံးဆရာရှုင့်။ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့ ပြသင့်လား၊ အထွေထွေနဲ့ ပြသင့်လား၊ ကင်ဆာဆရာနဲ့ ပြသင့်လား အကြံပေးပါအုံးဆရာ။ မျိုးရိုးထဲမှာ ကင်ဆာတော့ မဖြစ်ဘူးပါဘူးရှင့်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ပူနေလို့ပါဆရာ။ အခုထိတာ့ စစ်ဆေးမှုမလုပ်ရသေးပါဘူးဆရာ။ ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်။ ဆရာ အသက်ရှည်ကျန်းမာပါစေ။
၂။ ညီမလေးရဲ့ အသက်က ၂၁ ပါ။ အကျိတ်အလုံး စစမ်းမိတာတော့ ၁ ပတ်ကျော်ပါပြီရှင့်။ မေးရိုးအောက် မေးအိတ်ရဲ့
၃။ ဆရာရှင့် ကျွန်မ သားလေးက အသက် ၈ နှစ်ရှိပါပြီ။ ဒီနေ့မှ သတိထားမိတာက သူ့ရဲ့လည်ပင်းမှာ အကျိတ်လိုမျိုးလေး ၃-၄ လုံးလောက် အဖုလေးတွေ စမ်းမိပါတယ်။ သားငယ်ငယ်တုန်းကတော့ တီဘီ suspect ဖြစ်လို့ ဆေး ၆ လ သောက်ဖူးခဲ့တယ်။ နောက်ပြန်စစ်တော့ မရှိတော့ဘူးတဲ့။ အခုလက်ရှိမှာတော့ သားက ပုံမှန်စား (နဂို အစားနည်း)၊ ကစားတော်တော်သွက်၊ စာလိုက်နိုင်၊ ဒေါင့်စုံ အဆင်ပြေနေပါတယ်။ နွားနို့တော့ ညတိုင်းသောက်ပါတယ်။ အဲဒါတွေက အဖုအကျိတ်လေးတွေလားဆရာ။ ဆရာဝန်နဲ့ သွားပြသင့်သလားရှင့်။ စိတ်ပူလို့ပါရှင့်။ အကြံပေးပါဦးဆရာ။
၄။ ၁ နှစ် ၈ လအရွယ်ကလေးရဲ့ လည်ပင်းဘေး ဘယ်/ညာမှာ အလုံးကျိတ်သေးသေးလေးရှိနေပါတယ်။ စမ်းကြည့်လိုက်ရင်လည်း ရွေ့ရွေ့သွားပါတယ်ဆရာ။ အဲဒါ အန္တရာယ်ရှိမရှိ သိပါရစေ။
ဖက်ရှင်အလှအပများ ပေါလွန်းလှသည့် အချိန်တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများအတွက် ရွေးချယ်စရာများကလည်း များပြားလှသည်။ လူအများရွေးချယ်သည့် အ၀တ်အစားသည် ဖက်ရှင်ကျလှပရုံသာမက ကျန်းမာရေးအတွက် သက်ရောက်မှုလည်းရှိသည်။ နေ့စဉ်ဝတ်ဆင် သည့် အ၀တ်အစားများကို ပုံမှန်လဲလှယ်မှု မရှိ သည့်အတွက် လုံလောက်သော သန့်ရှင်းမှုမရှိ ခြင်း၊ ကျပ်လွန်းသည့် အ၀တ်အစားများကြောင့် သတိမပြုမိသော်လည်း နောက်ဆက်တွဲကျန်းမာ ရေးဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးများ ခံစားကြရနိုင်ကြောင်း အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်များကပြောပါ သည်။
ယခုအခါတွင် ခန်္ဓာကိုယ်အလှကို ပေါ်လွင် စေသည့် ဘောင်းဘီ ကျပ်ကျပ်များ လူငယ်ထု အတွင်း ပိုမိုအကြိုက်များလာကြသည်။ ထို ဘောင်းဘီအကျပ်များသည် အမျိုးသမီးများတွင် အဖြစ်များသည့် ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း ရောဂါဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရင်းများစွာထဲ မှတစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသိရသည်။ ဘောင်းဘီကျပ်ကျပ်သည် စမတ်ကျလှပသော် လည်း သက်သောင့်သက်သာတော့ မရှိလှပေ။ လှုပ်ရှားသွားလာနေသူများအတွက် ကျပ်နေ သည့် ဘောင်းဘီသည် အရေပြားပွန်းခြင်းများ၊ နီရဲလာခြင်းများနှင့် သွေးခြည်ဥခြင်း များအထိ ဖြစ်နိုင်ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပွန်းနေ သည့် အရေပြားမှတဆင့် ဆီးလမ်းကြောင်းထဲ ပိုးဝင်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်သည့်အခါ မကြာခဏ ဆီးသွားလိုခြင်း၊ ဆီးသွားလျှင် နာကျင်ခြင်း၊ ပူစပ်ပူလောင်ဖြစ် ခြင်း၊ ညပိုင်းတွင် ဆီးမကြာခဏသွားခြင်း၊ ဆီး အရောင်အနံ့ပြောင်းလာခြင်းနှင့် ဆီးသွားလျှင် သွေးပါခြင်းစသည့် ရောဂါလက်္ခဏာများဖြစ်ပြီး၊ ဆီးနှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါအများစုမှာ ဆီးလမ်း ကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ကာ စောစီးစွာမကုသပါက ကျောက်ကပ်ပျက်စီးသည်အထိ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါ သည်။
ဘောင်းဘီရှည်အကျပ်သည် အစာအိမ်ကို သွားဖိမိသည့်အတွက် အစာအိမ်ထဲမှ အစာချဉ် ရည်များထွက်ခြင်း၊ ရင်ခေါင်းပူပြီး နာခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း၊ မကြာခဏ ၀မ်းသွား ခြင်းစသည့် ဆိုးရွားသည့်ပြဿနာများပါ ဖြစ် ပွားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ““အောက်ခံအ၀တ် ကျပ်ကျပ်တွေကတော့ ပထမဆုံးပေါင်ပွန်း တာ တွေဖြစ်တယ်။ ပြီးရင် မွေးညင်းပေါက်တွေရောင် လာတာ၊ မှိုပိုးဝင်တာတွေ ဖြစ်လာတယ်။ အရေ ပြားမှာ ပွေးပေါက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပြီး အဲဒီကနေ စနစ်တကျကုသမှုမရှိရင် ထပ်ဆိုးဝါးတဲ့ အခြေ အနေတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်””ဟု ဒေါက်တာ မြတ်ဝေကပြောသည်။
အရေပြားတွင်ဖြစ်သည့် ယားနာများအတွက် လိမ်းဆေးများအသုံးပြုလျှင် လွယ်လွယ်ကူကူ ပျောက်ကင်းနိုင်သည်ဆိုသော် လည်း လိမ်းဆေးအချို့တွင် အရေပြားကိုယ်ခံ စွမ်းအားကျစေသည့် စတီးရွိုက်ပါဝင်သော လိမ်း ဆေးများလည်းရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သော လိမ်းဆေး များအား ရိုးရိုးယားနာပျောက်ရန်အတွက် လိမ်း သည့်အခါ အရေပြား ပွန်းပဲ့ခြင်းကြောင့် ပုံမှန် မဟုတ်သော အရေပြားသည် အရေပြားကိုယ်ခံ စွမ်းအား ကျဆင်းသွားစေပြီး ပိုးဝင်ခြင်းကို ပိုမိုဆိုးရွားသွားစေ သည်လည်းရှိကြောင်း သိရ သည်။ ဘောင်းဘီကျပ်များက ပေါင်နေရာအား စည်းထားသလိုဖြစ်သည့်အတွက် ကျပ်ခြင်း၊ နာခြင်း၊ ထုံခြင်းတို့ပါ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
ကျပ်လွန်းသည့် ဘောင်းဘီများကြောင့် ခြေထောက်ရှိအကြောများ၊ တင်ပါးဆုံမှ အာရုံ ကြောများ ထိခိုက်နိုင်ခြင်းတို့ပါ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင် သည့်အပြင် ခြေထောက်ရှိအကြောများပြတ် တောက်ခြင်း၊ အရေပြားတွင် အကြောများ ပြတ် တောက်ခြင်းစသည့် ဆိုးကျိုးများ လည်း ဖြစ်ပေါ် စေနိုင်သည်။ ဆီးချိုရောဂါရှိသူများ၊ ကိုယ်အလေး ချိန်များသူများ၊ တုံ့ပြန်လွယ်သည့် အသားအရေ ရှိသူများ၊ မူလက အရေပြားရောဂါ ခံစားနေရ သူများ ဘောင်းဘီကျပ်ကျပ်ဝတ်ခြင်းအား ပိုမို သတိပြုသင့်ကြောင်းသိရသည်။ များသောအား ဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာသော်လည်း အောက်ခံအ၀တ်အစားများအား မူလသုံးသည့် ဆိုဒ်များသာသုံးခြင်းကလည်း အရေပြားပွန်းပဲ့ ပြီး နောက်ဆက် တွဲရောဂါများ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များအတွက် အောက်ခံအ၀တ်အစားများသည် ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ အောက်ခံ အ၀တ်အစားကို အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် တစ်ရက် ထက်ပို၍ ၀တ်ဆင်ရန်မသင့်တော်ပေ။
ခန်္ဓာကိုယ် မှထွက်ရှိလာသည့် ချွေးများကြောင့် စိုစွတ်နေ သည့် အောက်ခံအ၀တ်အစားများအတွင်း ပိုး ပေါက်ဖွားပြီး မှိုပိုးများဝင်နိုင်ခြင်း၊ ပွေးကဲ့သို့သော အရေပြားရောဂါ များ ဖြစ်ပွားလာနိုင်ခြင်းစသည် တို့ကို ခံစားရနိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင် အဟောင်းများကို မကြာခဏ ပြန်ဝတ်ခြင်း၊ အဟောင်းလွန်သွားသည်အထိ Underwear များအား အသုံးပြုနေခြင်းတို့သည် အောက်ခံအ၀တ်များ ဟောင်းသည့်အခါတွင် ထွက်လာသော အမွေးများက အရေပြားတွင် တုံ့ပြန်လွယ်ခြင်းများကြောင့် အရေပြားနီခြင်း၊ ရောင်ခြင်းများလည်း ခံစားရနိုင်ကြောင်း ဒေါက် တာထူးညိုကပြောသည်။ အောက်ခံအ၀တ်အ စားများအား ခြောက်လ ထက်ပိုပြီး အသုံးမပြု သင့်ဘဲ အခြားသူများနှင့် မျှဝေသုံးစွဲခြင်းကို လည်း သတိပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင် အောက်ခံအ၀တ်အစား ကျပ်ကျပ်များ ကို ၂၄ နာရီလုံး ၀တ်ဆင်ထားခြင်းသည် အမျိုး သားများအတွက် သားသမီးရနိုင်သည့် စွမ်းရည် ကိုပါ ကျဆင်းစေ သည်အထိ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း နှင့် ထိုအ၀တ်အစားများကို အမျိုးသား၊ အမျိုး သမီးများပါ ညအိပ်ဝတ်ခြင်းကိုမူ လုံးဝရှောင် ကြဉ်သင့်ကြောင်း နိုင်ငံတကာ မှ ပညာရှင်များ ကလည်း အကြံပြုပြောကြားထားသည်။
““ညဘက်အိပ်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ခန်္ဓာရဲ့ ကြွက်သားတွေကလည်း နားနေကြတယ်။ အညစ်အကြေးထုတ်တာ၊ ကိုယ်ခံအားစနစ် ပြုပြင်ပေး တာတွေ လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျပ် တဲ့အောက်ခံတွေက အနှောင့် အယှက်ပေးတယ်။ အမျိုးသားတွေမှာ အဲလိုအောက်ခံကျပ်ကျပ်တွေ ရဲ့ ဆိုးကျိုးကို ပိုခံစားကြရတယ်””ဟု ဒေါက်တာ ဘုန်းနေသွန်း က ပြောသည်။ နေ့စဉ်ဝတ်ဆင် သည့် အ၀တ်အစားများမှ တဆင့် ရောဂါများရရှိ သည်အထိ မဖြစ်စေရန်၊ ရွေးချယ်အသုံးပြုကြ ရန် လိုအပ်ပြီး၊ မိမိနှင့်သင့်လျော်သည့် သိပ် မကျပ်လွန်း၊ မကျယ်လွန်းသည့် အ၀တ်အစား များအသုံးပြုခြင်း၊ အောက်ခံအ၀တ်အစားများ အား တစ်ထည်တည်းကို ထပ်ခါဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် အချိန်ကြာဝတ်ဆင်ခြင်းအား သတိပြုခြင်း၊ ချွေး စုပ်နိုင်သည့်အသားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အောက်ခံ များအား အသုံးပြုသင့်ကြောင်း သိရ သည်။ နိုင်ငံတကာရှိ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ပညာ ရှင်များမှ လေ့လာတွေ့ရှိထားသည့် ကျန်းမာရေး အတွက် ဆိုးရွားစေသည့် ဆင်ခြင်ရမည့်အချက် များထဲတွင် ဒေါက်ဖိနပ်အမြင့်များ စီးခြင်း၊ ဆေး မင်ကြောင်ထိုးခြင်း၊ ခန်္ဓာကိုယ်အပေါက် များ ဖောက်ခြင်း၊ နေပူခံခြင်းစသည့်အကြောင်းအရာ များအပြင် အလွန်ကျပ်သည့် ဘောင်းဘီများက လည်း ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ် စေနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားကြသည်။
M Plaza Shopping Journal (Vol 1 , No. 16)
( သင့်မ်ိတ်ဆွေများကိုလည်း မျှဝေပေးလိုက်ပါဦးနော် )
ဆံပင်အမြန်ဆုံးရှည်လာစေမည့်နည်းလမ်း ၇ မျိုး
အမျိုးသမီးတွေနဲ့ အမျိုးသားတွေအကြား စကားများ ရန်ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာ ဆံပင်ပုံစံကြောင့်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ တစ်ချို့က မိန်းကလေးတွေကို ဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ့ ရှိစေချင်ပြီး တစ်ချို့ကတော့ ဆံပင်တိုတိုနဲ့သာ ရှိစေချင်ပါတယ်။
ရှည်နေတုန်းမှာ ချက်ချင်းညှပ်လိုက်လို့ရပေမယ့် တိုနေတုန်းမှာတော့ ဆံပင်တွေကို ချက်ခြင်းရှည်လာအောင် လုပ်လို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မြန်မြန် ဆံပင်ရှည်လာအောင်တော့ လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဆံပင်မြန်မြန် ရှည်လာစေမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း (၇) ခု ရှိပါတယ်။
၁။ ခေါင်းလျှော်ရည် ကောင်းကောင်းသုံးပါ။
၂။ မကြာမကြာ ခေါင်းလျှော်ပေးပါ။
၃။ ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါတိုင်း ရေအေးသာသုံးပါ။ ဆံပင်ကျွတ် သက်သာစေပြီး အရှည်မြန်စေပါတယ်။
၄။ ခေါင်းသေသေချာချာ ဖြီးပါ။ ဆံပင်ရှင်းပါ။
၅။ ဆံပင်အနားစတွေကို ညီညီလေး ညှပ်ပေးထားပါ။ အဖျားမကောင်းတဲ့ ဆံပင်တွေကရှိရင် အရှည် နှေးကွေးစေပါတယ်။
၆။ အစားအသောက်ဂရုစိုက်ပါ။ အစားအသောက်နဲ့ ဆံပင်ကောင်းခြင်းကလည်း သက်ဆိုင်လျှက် ရှိပါတယ်။ ငါး၊ သစ်သီးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ များများစားပေးပါ။
၇။ ရေများများသောက်ပါ။ ရေဓာတ် မလုံလောက်ရင် အသားအရေနဲ့ ဆံသားကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ရေ ရှစ်ခွက်လောက် သောက်သင့်ပါတယ်။